प्रविधिले यसरी मार्दैछ मानवीयता - Jhilko
प्रविधिले यसरी मार्दैछ मानवीयता
काठमाडौं । जव शहरमा कुनै दुर्घटना हुन्छ तव हरेक व्यक्ति हातमा मोवाइल लिएर फोटो र भिडियो खिच्न थाल्छ । तस्बिर खिचेर समाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युवमा पोष्ट गर्ने सबैलाई हतार हुन्छ । मानौं यहाँका सबै नागरिक पत्रकार हुन् ।
उता दुर्घटनामा घाइते भएको व्यक्ति जीवन मरणको दोसाँधमा छ्पटाइरहेको हुन्छ । छेउमा रमिता हेरेर बस्नै कसैलाई पनि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तिलाई उठाउने, पानी पिलाउने र बगिरहेको रगतमा हात लगाएर रगत थाम्ने चिन्ता हुँदैन ।
सवारी दुर्घटना भएको केही समयपछि ट्राफिक प्रहरी र अन्य सुरक्षाकर्मीहरु घटनास्थलमा पुग्छन् तर उनीहरुलाई पनि घाइतेको यथाशीघ्र उपचार गर्नतर्फ र अस्पताल लैजानतर्फ ध्यान जाँदैन । उनीहरु पनि आफ्नो जागिर पकाउन अर्थात, घटनाको बारेमा मुचुल्का तयार गर्न लाग्छन् ।
यो कुनै काल्पनिक दन्त्य कथा होइन । यस्ता घटना काठमाडौंमा दैनिकजसो देखिदै आएका छन् । दुई दिनअघि मात्रै ललितपुरको नख्खुमा एनसेलको कार्यालयमा भएको बम आक्रमणपछि पनि यस्तै परिघटना देखाप¥यो । जव एनसेलको मुख्यालयमा आक्रमण भयो तव मानिसहरु तत्काल घटनास्थलमा रमाइलो हेर्न मेला लागेको झैँ भेला भए । उता बमको छर्रा लागेका घाइते भने छट्पटाइरेका थिए । राजधानीको अति व्यस्त स्थानमा भएको घटनामा प्रहरी करिव १५ मिनेट जति ढिला आइपुग्यो र कलम कापी बोकेर थाल्यो मुचुल्का तयार पार्न । घाइते भने भुईँमा रगताम्य भई छटपटाइरहेका थिए । सोही घटनाका एक घाइतेको पछि उपचारका क्रममा दुःखद निधन भयो । यदि उनले समयमै उपचार पाएको भए र आम नागरिकहरु फेसबुके पत्रकार बनेर भिडियो र फोटो खिच्न नथालेको भए सायद ती व्यक्तिको ज्यान बच्ने पो थियो कि !
विज्ञान र प्रविधिको आजको युगमा नेपाली समाज कतातिर जाँदै छ ? हामी नेपालीहरुको मानवीयता के हो ? यो प्रश्न यतिबेला गम्भीर रुपले खडा भएको छ । प्रविधिको युगले मानिसलाई अल्छी बनाउँदै लगेको छ । यसको दुरुपयोगले गर्दा बौद्धिक चोरी ह्वारह्वारी बढेको छ । पत्रकारहरुकै समाचार एउटा अनलाइनबाट अर्कोमा व्यापक चोरी (कपी पेष्ट) भएको छ । मानिसमा नयाँ सिर्जनशीलता मर्दै गएको छ । सबैभन्दा ठूलो असर त प्रबिधिले हरेकलाई भिडियोग्राफर बनाइदिएको छ, हरेकलाई पत्रकार बनाइदिएको छ र हरेकलाई बिश्लेषक बनाइदिएको छ । प्रविधिले मानिसलाई मानवीय कार्यमा अभिरुची होइन अरुची लगाइदिएको छ । यहाँ सेवाभाव मर्दै गएको छ ।
त्यसैले प्रविधिले हामीलाई चलाउने होइन, हामीले प्रविधिलाई चलाउने र मानवीयता र समाजिक कार्यलाई अझ उचाइमा पु¥यादै लैजानु आज हामी सबैको दायित्व हो ।
प्रविधिले गर्दा शहरिया मानिसहरुमा मानवीयता कमजोर हुँदै छ । भनिन्छ, गाउँमा घरहरु टाढा हुन्छन् तर सम्वन्धहरु नजिक हुन्छ । तर, शहरमा घरहरु नजिक हुन्छन् तर सम्वन्ध र मानवीयताहरु निकै टाढा हुन्छन् ।
२०४७ पछिका राजनीतिज्ञ, प्रशासक लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्न कमल थापाको माग
शेयर बजार ७ अंकले बढ्यो
पाउँदी पुल अन्तिम चरणमा
जिल्लाको सुन्दरबजार नगरपालिका–६ र तनहुँ भानु नगरपालिका–११ मानेचौका जोड्ने मोटरेबल...
घरझगडाः छोराले गरे बुवाको हत्या, आमा गम्भीर घाइते
५५ वर्षीय छोरा उदे रावतले आइतबार राति ७५ वर्षीय बुवा काल्चे रावतको धारिलो हतियार...